Ciidanka NISA oo Muqdisho ku toogtay qof shacab ahaa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidanka NISA oo Muqdisho ku toogtay qof shacab ahaa
Ciidanka NISA oo Muqdisho ku toogtay qof shacab ahaa
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Waaxda Wajeer, Ciidanka loo yaqaano Alpha Group ayaa duhurnimadii maanta waxa ay halkaasi ku dileen qof shacab ahaa.
Goobjoogayaal ayaa Idaacadda Risaala u sheegay toogashadan inay ka dambeysay kadib markii gaari iska roge ahaa uu dhexda u galay kolonyo ciidankan Alpha Group ah, intaasi kadib ciidanka ayaa shakiyay, waxayna rasaas ku fureen gaariga, halkaasi waxaa ku geeriyooday qof shacab ahaa, halka mid kalena uu ku dhaawacmay.
Ciidanka Alpha Group ee qeybta ka ah NISA ayaa intaasi kadib hakiyay socodkoodii, waxayna halkaasi ka qaadeen qofkii dhaawaca ahaa, iyaga oo geeyay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho.
“Walaal falkan wuxuu ka dhacay Wajeer oo ka tirsan degmada Kaaraan, ciidamada Alpha Group ayaa rasaas ku furay gaari Caragediye ah oo wadada marayay, waxay dileen Hal qof, mid kalena way dhaawaceen, goobta ciidamo ayaa yimid.” Ayuu yiri qof ka mid ah dadka degaanka.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan sidan oo kale waxay dilal u geysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsan, inta badan ma dhacdo in gacanta lagu soo dhigo ciidanka tacadiyada geysta.